BBA Volunteers isaRestricted Group with 8 members.
Fw: Series of Dhamma Talk in Singapore by Bamaw SayadawGyi Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa and YanKin Aye Nyain YeikTha Sayadaw Ashin Kelartha
Invitation for Dhamma Talk in Singapore Dear Brothers and Sisters in dhamma, We would like to inform you that Bamaw SayadawGyi Dr. Bhaddanta
Invitation for Dhamma Talk in Singapore
We would like to inform you that Bamaw SayadawGyi Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa and YanKin Aye Nyein Yeiktha Sayadaw Ashin Kelartha will be conductingaseries of dhamma talk in singapore about
1)abrief explanation of benefit by reciting and listing to Pahtan Dhamma and
2) Kanni Vipassana Meditation Method (samantha-based) practised by Venerable Maung Htaung Myayzin Sayadaw
The details programs are as follow:
Sayadaw's arrival to Singapore
Air-Line : MAI (MYANMAR AIRWAYS INTL)
Flight No: 8M-231
Arrival Time: 12:25pm
Changi Airport Terminal-1
Sayadaws will be staying in Singapore till 31-March-2010.
Dhamma Talks Details Program
(Day-1) 20 Mar 2010 (Sat)
a) 4:00pm to 5:15 pm
Topic: Pahtan Tayar (1) by Bamaw SayadawGyi
b) 5:15pm to 5:45 Recess
c) 5:45pm to 7:00 pm
Topic: Pahtan Tayar (2) by by Bamaw SayadawGyi
(Day-2) 21 Mar 2010 (Sun)
Topic: Mayzin Vipassana Meditation (1) by Bamaw SayadawGyi
Topic: Mayzin Vipassana Meditation (2) by Sayadaw Ashin Kelartha
(Day-3) 27 Mar 2010 (Sat )
Topic: Mayzin Vipassana Meditation (3) by Bamaw SayadawGyi
Mayzin Vipassana Meditation (4) by Sayadaw Ashin Kelartha
(Day-4) 28 Mar 2010 (Sun)
Topic: Mayzin Vipassana Meditation (5) by Bamaw SayadawGyi
Topic: Mayzin Vipassana Meditation (6) by Sayadaw Ashin Kelartha
Venue for all of the above dhamma talks:
Informatic Campus ( Near Jurong East MRT )
12 Science Centre Road (S) 609079
Opposite to Science Center
Dhamma Talk Live Broadcast
We will transmit the dhamma talk session in live video over the following websites
Please help us to forward this email to your friends.
“ တရားပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ ”
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင်အပေါင်းတို့ ...................
၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၇ နှင့် ၂၈ ရက်နေ့များတွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံ INFORMATICS CAMPUS ၌ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတရားတော်များနှင့် ကန္နီဥပနိသျခံ မြေဇင်းနည်း ၀ိပဿနာတရားတော်များကို အဘိဓဇ အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မဇောတိက၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာဘဒ္ဒ န္တကုမာရာဘိဝံသ နှင့် ရန်ကင်း အေးငြိမ်းရိပ်သာ ဆရာတော် အရှင်ကေလာသ တို့မှ အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ဟောကြားချီးမြှင့်မည် ဖြစ်ပါ၍ တရားတော်နာ ကြွရောက်ပါရန် လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
20 Mar 2010 (Sat)
4:00 to 5:15 pm ပဋ္ဌာန်းတရားတော် အပိုင်း(၁) ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး
5:45 to 7:00 pm ပဋ္ဌာန်းတရားတော် အပိုင်း(၂) ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး
21 Mar 2010 (Sun)
4:00 to 5:15 pm မြေဇင်းဝိပဿနာအပိုင်း(၁) ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး
5:45 to 7:00 pm မြေဇင်းဝိပဿနာအပိုင်း(၂) အရှင်ကေလာသ (မြေဇင်း)
27 Mar 2010 (Sat)
4:00 to 5:15 pm မြေဇင်းဝိပဿနာအပိုင်း(၃) ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး
5:45 to 7:00 pm မြေဇင်းဝိပဿနာအပိုင်း(၄) အရှင်ကေလာသ (မြေဇင်း)
28 Mar 2010 (Sun)
4:00 to 5:15 pm မြေဇင်းဝိပဿနာအပိုင်း(၅) ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး
5:45 to 7:00 pm မြေဇင်းဝိပဿနာအပိုင်း(၆) အရှင်ကေလာသ (မြေဇင်း)
Informatics Campus (Near Jurong East MRT)
12 Science Centre Road, (S) 609079, Opposite to Science Centre.
ဆရာတော်ကြီးများသည် (၁၈-၀၃-၂၀၁၀)နေ့ နေ့လည် 12:25 pm (Singapore Time) တွင် MAI လေယာဉ်ခရီးစဉ်အမှတ် 8M231 ဖြင့် Changi လေဆိပ်သို့ ဆိုက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး စင်္ကာပူတွင် (၃၁-၀၃-၂၀၁၀) နေ့ထိ သီတင်းသုံးနေထိုင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကိုထင်ကျော် (ဖုန်း - ၉၄၂၄ ၂၉၆၁)
ကိုကျော်ဝဏ္ဏ (ဖုန်း - ၈၂၃၆ ၉၁၅၉)
ကိုအောင်ပြည့်စုံအေး (ဖုန်း- ၉၁၁၉ ၇၃၆၁)
ကိုဝင်းထွန်းဆင့် (ဖုန်း - ၉၀၂၂ ၃၆၄၃)
ကိုဝင်းဇော်ဦး (ဖုန်း - ၉၃၃၈ ၇၈၂၇)
ကိုရဲမြင့် (ဖုန်း-၉၀၄၆ ၀၂၉၀)
ကိုကျော်လွင် (ဖုန်း - ၉၇၃၆ ၅၀၃၄)
If you do not wish to receive the email annoncement in future, please email to unsubscribe@...